I-Central Africa-kwipolitiki | KONGOLISOLO INC
Umsebenzi okufanele uwukhumbule: impi ngommeleli ngokusho kukaVital Kamerhe; Isikhulu saseCongo esake sazi imvula nesimo sezulu esikahle, uVital Kamerhe ngezinsolo zakhe, sikhombisa ukuthuthuka okuningana nezinkinga zobudlelwano namazwe ...
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 3, 2020 10: 45 Awekho amazwana
UVital Kamerhe ubelokhu esondelene kakhulu nesihloko sakhe; kukhombisa ngokusobala izibalo ze- "War by proxy", kumdlalo weqiniso wamandla amakhulu, omhlaba jikelele kanye ...	Funda kabanzi
ECongo: kuthiwani uma iBrazilzaville ishintshe igama layo? Ngo-Ephreli 23, 2014, uMongameli waseCongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, ngokuxabana nabazukulu bomhloli ongumhloli wamazwe uPierre Savorgnan de Brazza, wayezosabisa ngokuthi uzoyiqamba kabusha inhlokodolobha yaseCongo
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Julayi 3, 2020 00: 00 Awekho amazwana
Idolobha laseBrazzaville, "elaliyiDolobha" laseFrance Elikhululekile likaCharles de Gaulle phakathi neMpi Yezwe Yesibili, lalingalahlekelwa igama lalo. Zonke izindawo zomphakathi ezibizwe ngegama ...	Funda kabanzi
Isimemo esivela kuMadame Amida Shatur Kamerhe kumshushisi: ukungaphenduki ngokumelene neKamerhe noma ukusesha okugcwele kokubusa komthetho e-DRC? Umshushisi weNkantolo yokuDlulisa amacala yaseMatete umeme uNksz Amida Shatur lo Lwesihlanu, ngoJuni 26 ukuze kuphenywe ngecala
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 26, 2020 00: 35 Awekho amazwana
Lesi simemo sibhekiswe kuNkk Amida Shatur Kamerhe ezinsukwini ezimbalwa ngemuva kokugwetshwa komyeni wakhe uVital Kamerhe (owayengumphathi wehhovisi leNhloko Yezwe) ka ...	Funda kabanzi
Ikhasi lomlando le-DRC: yini ongayigcina kuhulumeni uMoïse Tshombe (1964 - Julayi 1965)? Ungomunye wabaqokiwe emlandweni weDemocratic Republic of the Congo (DRC) ngemuva kwenkululeko yezwe ngoJuni 30, 1960
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 24, 2020 16: 10 Awekho amazwana
Ungumuntu oqinile wesonto laseKatangese, unezinsuku eziyi-11 kuphela zenkululeko yaseCongo. Ubuye ekudingisweni ngemuva kokuba izinto zaba nzima ngemuva kokubulawa kukaPatrice Emery Lumumb ...	Funda kabanzi
Le minyaka yokucula nokudansa ngokudumisa i-Zairian Leopard; inkolo yobuntu yayenze uMobutu aphuphe ngamandla amaphakade, aze ayokukhohlwa ubuthakathaka obunamandla bomuntu "Ukufa"
Kuthunyelwe ngu: KongoLisoloku: Juni 24, 2020 14: 35 Awekho amazwana
Kujabule umuntu odansa futhi ohlabelelayo, leso isiqubulo sikaMobutu Sese Seseko, owayengumholi weDemocratic Republic of the Congo, kwase kuba yiZaire. IMobutu iyaphumelela ngozibuthe kanye ...	Funda kabanzi